Yonke into oyifunayo kufuneka uyikhathalele intlanzi yediski, inkosi ye-aquarium | Ngeentlanzi
IsiJamani sasePortillo | | IiDiski, Intlanzi
Namhlanje siza kuthetha ngentlanzi ngobuhle bayo obenza ukuba ithathelwe ingqalelo ukumkani we-aquarium. Imalunga nentlanzi yediski. Ezi ntlanzi zintle ngokumangalisayo, kwaye nokuqinisekisa ukukhula kwazo okunempilo kunye nophuhliso ngumsebenzi olula.
Apha siza kuthetha malunga nendlela yokubanyamekela, iimpawu kunye nezinye izinto ezinomdla. Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi ngolu hlobo lwentlanzi?
1 Ukumkani we-aquarium
2 Xoxa iimpawu zentlanzi kunye ne-morphology
5 Ukutya ukutya kweentlanzi
7 Izinto eziyimfuneko kulondolozo kunye nezifo
8 Iidiski ezahlukeneyo kunye namaxabiso
8.1 I-Disco Fish Heckel, iSymphysodon Discus
8.2 I-Brown Discus Fish, uSymphysodon Aequifasciatus Axelrodi
8.3 Intlanzi yeGreen Discus, iSymphysodon Aequifasciatus Aequifasciatus
8.4 Intlanzi yeBlue Discus, uSymphysodon Aequifasciatus Haraldi
Ngaphambi kokuba abantu baqale ukwenza iminqamlezo phakathi kweentlobo zeentlanzi, kwakunzima kakhulu ukukhathalela iintlanzi zediski. Iimfuno zabo zazinkulu kakhulu kwaye zingqongqo. Nangona kunjalo, unanamhla, kunjalo ngumsebenzi olula. Oku kwenzeka ngenxa yokuwela iintlobo ezininzi zeentlanzi, ziye zaqhelana nobomi ekuthinjweni, ke "ziyasetyenziswa" ukuba ziphile ngaloo ndlela kwaye azifuni nkathalo ingako.
Kuyinyani ukuba iintlanzi zediski zifuna ukunikwa ingqwalaselo enkulu ngokwe ukutya kunye nomgangatho wamanziKe ngoko inokuhlelwa njengodidi oluthambileyo. Ukuba abondliwa kakuhle okanye umgangatho wamanzi awulunganga, banako ukosuleleka zizifo kunye nezidleleli ngokukhawuleza.
Ngenxa yezinye zezi mfuno, baninzi abantu abaneendawo zasemanzini abazikhanyele le ntlanzi kwaye bavale iingcango emakhayeni abo. Kwelinye icala, kukho abantu ababuxabisileyo ubuncwane bezi ntlanzi kwaye bakhetha ukusebenza nzima ukuzigcina, babonise uthando kwaye bahlangabezane nomceli mngeni wokuzikhathalela.
Xoxa iimpawu zentlanzi kunye ne-morphology
Ezi ntlanzi zezosapho lwe-cichlid, ezenza inxalenye ye-odolo ye-perciformes. Igama lenzululwazi yentlanzi yediski yile Ingxoxo yeSymphysodon, onentsingiselo yakhe ibonakala kwimeko yolu shishino. Ukuba zikhathalelwe ngokuchanekileyo kwaye izikhokelo eziyimfuneko zokutya ukutya okusempilweni kunye nemeko esempilweni iyalandelwa, ezi ntlanzi zingaphila ukuya kwiminyaka eli-12.
Ngabanye oomatiloshe ezi ntlanzi ziyaqwalaselwa eyona intle kuzo zonke iintlobo zentlanzi zasemanzini.
Ngokubhekisele kwi-morphology, banokuqatshelwa ngokulula, kuba ziintlanzi ezinemilo engqukuva, yomzimba osicaba. Iimpiko zayo, umva kunye nomva, zihamba ecaleni komzimba ukuya emsileni, egcina imilo engunxantathu yokwenza iintshukumo ezikhawulezayo. Xa sele bebadala, banokufikelela kubude ukuya kwi-20 cmKuyacetyiswa ukuba ube nayo kwi-aquarium enayo umthamo wamanzi weelitha ezingama-40.
Umbala wabo wesikhumba ubenza bahluke kolu didi. Imibala yabo ihlala isusela kumbala oluhlaza okwesibhakabhaka okanye otyheli ukuya kumhlophe okanye kubomvu onzulu. Ineebhendi ezimnyama ezilithoba eziwela umzimba wazo ngokuthe nkqo kwaye zinomsebenzi onomdla: zezona zichazayo imo yoxinzelelo okanye inqanaba loxinzelelo ukuba intlanzi yediski iyasokola, kuxhomekeke kubungakanani bombala.
Zikwakhombisa kakhulu ngamehlo abo abomvu. Ukukwazi ukwahlula phakathi kwendoda nebhinqa kuyinkimbinkimbi, kuba kukho i-dimorphism yesondo. Ngexesha lokuzalisa, nangona kunjalo, ipapilla yesini yamadoda iyakhonjwa kwaye kwabasetyhini bajikelezwa.
Ezi ntlanzi zihlala kwimimandla yoMzantsi Merika ezihlala kuyo iBrazil nePeru. Bahlala bahlala kwizitya zemilambo yeAmazon kunye namachibi anamanzi angenamsebenzi ungako. Indawo yokuhlala yenziwa bubushushu obufudumeleyo obuqhelekileyo bale ndawo yetropiki, eya kuthi kamva ichaphazele ubushushu ekufuneka amanzi e-aquarium abe nawo.
Xa kukho amaxesha ezikhukula, umlambo utsala lonke utyani emanzini, obangela ukuba isixa esikhulu sezinto eziphilayo zigcinwe kwaye zibole ngokuhamba kwexesha. Esi siganeko sineemeko eziguquguqukayo ezisetyenziselwa ukuloba iintlanzi, umzekelo, uhlobo lwe-asidi pH (phakathi kwe-4 no-6) kwaye ubunzima bokungabi namanzi. Ke ngoko, kamva siza kubona ukuba amanzi kufuneka agcinwe kwi-pH ene-asidi.
Ezi meko zamanzi aneasidi ezininzi zithetha ukuba akukho zintsholongwane kunye nezidleleli emanzini kwaye zinokuhlasela iintlanzi. Ke ngoko, kubalulekile ukugcina ubushushu obufanelekileyo kunye neemeko zepH, kuba ezi ntlanzi zisengozini yosulelo. Kungenxa yoko le nto sicebisa ukuba ube ne umgangatho wemitha yamanzi.
Ukuziphatha kwezi ntlanzi kubenza babe nolawulo oluphezulu kwiindawo abahlala kuzo. Bachaza inkokeli kwaye kufuneka simnikeze phakathi kwabalandeli abasi-8 ukuya kwabali-12 bokukhapha. Nangona zingahlali ndawo, zihamba ngeembadada, ke indawo enkulu kufuneka igcinwe kwi-aquarium yethu.
Ngamanye amaxesha, xa begula okanye benamanqanaba aphezulu oxinzelelo, iintlanzi zediski zifumana umbala omnyama kulusu lwazo, kwaye zisenokuzibonisa ngokuqubha kwizangqa, ngokuma okungayekiyo okanye ukubhengeza ngesiquphe kwemivimbo emnyama. Ezi mpawu ziyakusinceda ukusilumkisa ngemeko yendalo esingqongileyo, into ekufuneka siyibeke esweni amaxesha ngamaxesha.
Ngokuhambelana, intlanzi yediski ikulungele ukuhlala nayo I-Tetra, ii-cichlids ezincinci kunye nee-loricars.
Ukutya ukutya kweentlanzi
Elinye lamaqhosha aphambili okunyamekela idiski yintlanzi kukondla. Kuya kufuneka batye ukutya ngokudibeneyo ukutya ukutya, ezinje ngemibungu yengcongconi okanye i-brine shrimp, nezikali kunye neminye imifuno. Isidudu esenziwe ekhaya esenziwe sisibindi senkukhu kunye nentliziyo, iqanda, ibhanana, iminqathe, njl.
Kuya kufuneka bondliwe kabini ngemini kwaye bahlala bezinxalenye ezincinci kuba ezi ntlanzi kunokwenzeka ukuba zife ngenxa yokutyisa kakhulu kunendlala. Kufuneka kuqinisekiswe ukuba ukutya kuneprotheyini eninzi kunye neevithamini zokukhula okufanelekileyo kunye nemeko esempilweni.
Xa intlanzi yediski ibeka amaqanda kuqala, uninzi lwazo ingatyiwa ngabazali. Oku akufuneki kusikhathaze, njengoko kuyinxalenye yendlela yabo yokuphila. Kwezi zihlandlo zilandelayo, baya kwenza useto lokugqibela. Kwiintsuku nje ezimbalwa emva kokubeka amaqanda, sinokubona ukudada okuqubha emanzini kunye nokondla kwi-mucosa efihla ulusu lwabazali. Ixesha elingaphezulu, siqala ngokwazisa i-brine shrimp kunye nokutya okukhudlwana njengoko iintsuku zihamba.
Kubalulekile ukuba, phakathi kwenyanga ka-Okthobha ukuya ku-Epreli, iintlanzi ze-discus zinendawo elungileyo yokuthandana kunye nexesha lokumitha. Olu lwalamano lusekwe kukuqubha kwesi sibini sijikeleza i-aquarium kwaye, emva koko, umntu ngamnye ubonakalisa imibala yakhe phambi komnye, ebonisa iimpawu zabo. Nje ukuba bagqibe ukuthandana, Bakhangela indawo efanelekileyo yokubeka. Kukho abanye abantu abakhetha ukushiya isibini sodwa kwi-aquarium ngeli xesha ukuze kungabikho ngxaki nezinye iintlanzi.
Izinto eziyimfuneko kulondolozo kunye nezifo
Ukuba uza kuba ne-discus yeentlanzi kwi-aquarium yakho, kubalulekile ukuba ubuncinci beesampulu ezi-4 ukuze inkokheli ikwazi ukuzilolonga ngaphezulu kwayo yonke enye. Nje ukuba ubeke iintlanzi kwi-aquarium azizukuthandana kwaye ziyakrokra. Kuya kufuneka ulinde kancinci uxinzelelo lwentshukumo ukuze luphele ukubondla.
Uya kudinga itanki yeentlanzi Iilitha ezili-100 zomthamo kunye neelitha ezingama-40 ngaphezulu kwikopi nganye ukuba ungene. Iqondo lobushushu lamanzi kufuneka lihlale ngaphezulu kwama-26 degrees (kunjalo uzakufuna imbawula yamanzi), kwaye ujonge ukuba kunjalo phantsi kwe-pH ngaphantsi kwe-7. Ukutshintsha amanzi, phinda uhlaziye i-20% yawo ngeveki. Beka igrabile emazantsi etanki ukuze iintlanzi zingabhidaniswa ngumfanekiso kwiglasi.
Ukuba ezi mfuno azifezekiswanga, iintlanzi zinokuphathwa zizifo ezinje ngezi:
Ukubaleka ngokungalawulekiyo kwi-aquarium.
Ukungalungi kwimiphetho kunye neephepheni (kubangelwa kukunqongophala kwezimbiwa).
Iidiski ezahlukeneyo kunye namaxabiso
I-Disco Fish Heckel, iSymphysodon Discus
Le ntlanzi ivela eRio Negro (eBrazil). Unayo ibhar emnyama emnyama yesihlanu Iindidi ezimbini, enye ebomvu neblue. Ithathelwa ingqalelo njengeyona ntlanzi kunzima ukuyigcina, kuba ifuna amanzi athambileyo kunye ne-pH esezantsi.
I-Brown Discus Fish, uSymphysodon Aequifasciatus Axelrodi
Olu hlobo lukhuliswa ngabantu abathanda iintlanzi zasendle, kuba kunzima kakhulu ukuzigcina. Inemvelaphi emdaka, ukusukela kumbala omthubi nokumthubi omdaka. Inemigca emibalabala kwimiphetho kwaye rhoqo entloko.
Intlanzi yeGreen Discus, iSymphysodon Aequifasciatus Aequifasciatus
Le ntlanzi inemibala eyahlukeneyo enombala oluhlaza omthubi noluhlaza okomnquma ukuya kumbala omdaka.
Intlanzi yeBlue Discus, uSymphysodon Aequifasciatus Haraldi
Banemibala eyahlukeneyo eblowu kwaye banemigca eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nemigca emizimbeni yabo, entloko nakwimiphetho.
Ixabiso leentlanzi zediski ngumsebenzi wobude. Iintlanzi ze I-5cm ixabisa malunga ne-25 ye-euro, ezo ze-8-9cm 60 euro kunye nabantu abadala abajikeleze i-euro ezingama-90.
Ngolu lwazi uya kuba nakho ukufumana i-discus ntlanzi kwi-aquarium yakho kwaye ukwazi ukuthi unakho ukukhathalela ookumkani be-aquarium.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Xoxa iintlanzi
uSlim White Coli sitsho
Ndicinga ukuba kuyothusa ukutsho ukuba kwidiski kufuneka ube ne-aquarium enelitha ezingama-40. Idiski nganye ifuna ubuncinci i-125 yeelitha, ngenxa yokhuphiswano lweencindi ezinqamlezileyo ezikhoyo xa zizala.
Phendula kwi-White Coli emhlophe
Abu Malik Faisal Yassin sitsho
Kukho uhlobo oluthile lwediski emfutshane engakhuli kangako ...
Phendula u-Abu Malik Faisal Yassin
UJorge carballo sitsho
Ndithenge nje ezi-4 kodwa zincinci, enkosi kulwazi malunga nokuziphatha kwabo ndikwazile ukucacisa ukuba kuyinto eqhelekileyo kwaye ndingoyiki kuba iindleko zabahlobo abancinci ziphezulu eMexico
Phendula Jorge carballo